FBSမှလက်ဆောင်တစ်ခုကို Yordan Mitev မှရရှိသွားပါတယ်
FBSက သူ့ ရဲ့ ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို လတိုင်းမှာ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါ. နှင်းလျှောစီးစကိတ်ဘုတ်တစ်ခုကိုလိုချင်ပြီး အားလပ်ရက်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေချင်ခဲ့တဲ့ဘူဂေးရီးယားက Yordan Mitevတစ်ယောက်ကတော့အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ရဲ့အနိုင်ရရှိသူဖြစ်လာပြီး သူ့ အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အတွက် FBSကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်ချက် ရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်.
သူပြောထားတာကတော့ဒီလိုပါ: "Hey FBS! ငါ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. စာတိုက်ကနေ FBSကနေပို့ လိုက်တဲ့ အကောင်းစားထိပ်တန်း နှင်းလျှောစီးစကိတ်ဘုတ်ကြီးကို လက်ခံရရှိတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်. ထို့ အပြင်သူ့ ရဲ့ ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်မှာ FBSကပို့ ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းနှင်းလျှောစီး အပန်းဖြေစခန်း ၁၀ခုထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ Borovets ကိုရောက်ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက် တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. FBSကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကျေးဇူးတင်လိုကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်.
Yordanတစ်ယောက် သူ့ ရဲ့အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီး ပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့ ရတဲ့အတွက် FBSကလည်း ထပ်တူဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်. Yordanတစ်ယောက် အားလပ်ရက်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အမြတ်အစွန်းတွေ များများရပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်!
FBS ရဲ့အိမ်မက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ အစီအစဉ်ရဲ့ နောက်ထပ်အနိုင်ရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလား?သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် စည်းကမ်းချက်တွေကိုအပြည့်အစုံဖတ်ရှုပြီး ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ: